Kolonyo gaadiidka Is-wada oo markii ugu horeysay Laami cagta saarey+SAWIRO – SBC
Kolonyo gaadiidka Is-wada oo markii ugu horeysay Laami cagta saarey+SAWIRO
Posted by editor on May 31, 2012 Comments
Horumar wanaagsan ayaa laga gaaray fikradii shirkada Google ay soo bandhigtey ee la xiriiray in baabuurtu darawal la’aan is wadi karaan, iyadoo taasi haatan lagu guuleystey.
Shirkada Volvo ee laga leeyahay wadanka Sweden ayaa soo bandhigtey tijaabo ay ku guuleysatey oo la xiriirta kolonyo gawaarida is-wada iskood, kuwaasi oo waliba ku dhex socdey Wado weyn (High Way) oo ku taal banaanka magaalada Barcelona ee dalka Spain.
Gaari uu wado darawal caadi ah ayaa horgal u noqdey sadex baabuur oo ah nooca Is-wada kuwaasi oo ahaa kolonyo waxaana ay socdey masaafo ku dhaw 200 km, taasi oo aheyd tijaabo lagu guuleystey sida bogeeda Internet-ka ay ku shaacisay shirkada Volvo.
Gawaaridan waxaa lagu rakibay qalab kala duwan oo la xiriira bad-qabka wadooyinka, sida Kaamirooyin, Raadar, dareemayaal Laser ah kuwaasi oo gacan ka geysanaya sidii gaarigu ugu socon lahaa wadada uuna uga weecan karo gawaarida kale, isla markaana ugu hogaansamayo sharciyada kale ee wadooyinka sida Layrarka Traffic-ga ama Samaafarayaash, iyadoo xarunta shirkada Volvo lagula soconayo gawaaridaasi halka ay marayaan.
Linda Wahlstrom oo ah maamulaha mashruuca Iskaashiga gawaariada ee shirkada Volvo ayaa gawaaridaasi Iskood isu wada dhex midkood fadhidey, hase yeeshee shukaanta gaariga (Streing-ka), Bareega iyo Sheelaraha midkoond gacmaha iyo lugaha ma saarin, waxay uun aheyd rakaab gaariga iska dhex fadhiya maadama gaarigu uu ahaa mid iskiis isu wadey oo aan u baahneyn wax darawal ah.
Gawaaridan ayaa ku socdey xawaare socod oo gaaraya 85 kmp (Saacadii 85 km) oo u dhiganta 53 mph (mile per houre).
Mid ka mid ah gawaarida oo haweenay shukaanta fadhida Journal iska aqrisanayso
“Waxay aheyd arin yara xiiso leh, waayo gawaarida aynu isdhaafaynay dadka saarnaa waxay aad ula yaabanayeen gaariga aan dhex fadhiyo oo aanan ka aheyn darawalka, taasi oo aheyd arin dadka soo jiidatey” ayey tiri Linda Wahlstrom.
Linda Wahlstrom waxay talaabadan lagu guuleystey ku tilmaamtey arin ku saleysan horumarka dhanka technology-da ee dunida ku talaabsatey.
“Qorshahan wuxuu dhiirigalin u sameynayaa ama horumar u yahay in darawaladu si raaxo leh gawaarida isaga dhex fadhiyaan, iyagoo qabsanaya hawlood kale xiliga socodka gaariga, tusaale ahaan waxay adeegsan karaan Lat top, akhrin buug, ama ay xaga dambe ee kuraasta gaariga inta fariistan iskaga raaxaysan karaan cunto cunid” ayaa lagu yiri warbixinta ka soo baxdey shirkada Volvo.
Docda kale shirkada Volvo waxay ku macneysay qorshahan mid gacan ka gaysanaya amaanka wadooyinka iyo gaadiidka, iyadoo sidoo kale xadeynta xawaaraha gaariga uu gacan ka geysanayo wasaqeynta hawada ee gaadiidka.
Horaantii sanadkan waxaa dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka Nevada shirkad Google ku soo bandhigtey baabuur Toyoto ah oo ay ku rakibtey qalab suurtagal ka dhigaya in gaarigu iskiis is-wado, ka dib markii arinkaasi lagu guuleystey gobolkaasi haatan waxaa ruqsada fasaxa socodka gaadiidka lagu darey in gaarigaasi uu wadooyinka dhex qaadi karo.
Maah maah somaliyed ayaa waxay ahayd
AWRBA AWRKA ka horeeya ayuu la saanqaadaa
Marka mar hadii gaari ka horeeyo oo hagaayo maxay faaido leeyihiin
Shibin Abdulahi says:
Adeer, Horey ayaa loo waayey SOMALI wax ogolaata weligaaba halkaa iyo diidmadaa iska taagnow, maxaad ku diiday haddii gaadhigu uu isaga laftiisa uun uu is wado.
shibiin, allay lehe ishaad kariday.
somali halayaabin shibiin somali wasaas iyo silamid ah
qof kii wax keena way kumacaradaan, watii hore loo yiri doqontu teeda kuma meel marto tukalena ma maqasho.
afar indhood says:
horta soomaalidu waa sunta hargaha oo waxkasta
wey mucaarada laakiin idinkuna harumaysanina
waxa ay gaaladu dhoob dhoobtay
ee haday doonaan isku dhacaya maxaa yeelay
wixii ilaah su
subxaanu watacaalaa abuurtey iskuma dhacaan
laakiin ayagu waa bini aadan